Shaqaalaha Adduunka ugu Fiican - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Sannadkii 2013, sharci-dejiyeyaasha gobolka Minnesota ayaa meel mariyay waxa loogu yeero sharciga ugu fiican adduunka ee loo yaqaan (WBWF), qeybta 120B.11. Sharcigani wuxuu ubaahanyahay in gudiga iskuulka, kulan dadweyne, ay qaataan qorshe dhameystiran, istiraatiijiyad fog ah si loo taageero loona hagaajiyo barida iyo barashada taas oo la jaanqaadaysa abuurida shaqaalaha aduunka ugu fiican.
Waa maxay Shaqaalaha Adduunka ugu Fiican?
Sharciga WBWF waxaa loo sameeyay si loo hubiyo in degmo kasta oo ka mid ah gobolka ay ku talaabsaneyso horumar si loo kordhiyo waxqabadka ardayda. Degmo kasta waa inay horumariso qorshe wax ka qabta shanta hadaf ee soo socda:
Dhammaan carruurtu waxay diyaar u yihiin dugsiga.
Dhammaan ardayda dhigata fasalka saddexaad waxay aqrin karaan heerka darajada.
Dhammaan farqiga u dhexeeya isir iyo dhaqaale ee udhaxeeya ardayda waa la xiray.
Dhammaan ardayda waxay diyaar u yihiin shaqo iyo kulliyad.
Dhammaan ardayda waxay ka qalin jabiyaan dugsiga sare.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Shaqada ugu Fiican Adduunka waxaa laga heli karaa websaydhka Waaxda Waxbarashada ee Minnesota .
Qorshaha Sannadlaha ah
Qorshaha Kasbashada & Isdhexgalka
Guddiga La-talinta ee WBWF
Waa maxay shuruudaha?
Degmo kastaa waa inay qaadataa qorshe istiraatiijiyadeed oo la jaan qaadaya WBWF. Qorshahani waa inuu taageeraa oo hagaajiyaa barista iyo barashada, wuxuuna ka kooban yahay waxyaabaha soo socda:
Si cad u qeexday ahdaafta iyo himilooyinka gaaritaanka ardayda.
Nidaam lagu qiimeeyo horumarka arday kasta ee ku aaddan la kulanka heerarka tacliimeed ee gobolka iyo deegaanka.
Nidaam dib-u-eegis lagu sameeyo laguna qiimeeyo wax ku oolnimada waxbaridda iyo manhajka.
Hawlo isku dhafan waxbarid tayo sare leh, manhaj adag, tikniyoolajiyad waxbaris, iyo dhaqan xirfadeed iskaashi oo taageera tayada macalinka, waxqabadka iyo waxtarka.
Istaraatijiyadaha ku saleysan caddeynta ee lagu hagaajinayo manhajka, waxbarista iyo hanashada ardayda.
Miisaaniyad sanadeed loogu talagalay sii socoshada fulinta qorshaha degmada.
Degmadu waa inay dib u eegis ku sameysaa qorshaheeda sanadle ah ayna daabacdaa warbixin ku saabsan natiijooyinka qorshaha deyr kasta. Guddiga Dugsigu wuxuu qaban doonaa kulan sanadle ah oo dadweyne ah, wuxuu sahamin ka sameyn doonaa daneeyayaasha ku saabsan xiriirka ay la leeyihiin dugsiyada iyo heerka qanacsanaanta, waxayna u gudbin doonaan warbixin kooban oo ku saabsan Guddoomiyaha Waxbarashada.
Qorshayaasha Sannadlaha ah ee WBWF iyo Bandhigga Dadweynaha
Diisambar 9, 2020 Bandhigga Xogta ee WBWF (PDF) iyo Webinar Kulan Dadweyne
Nofeembar 20, 2019 Bandhigga Xogta ee WBWF (PDF)
2018-19 Isku-darka WBWF Soo-koobista iyo Warbixinta Horumarka Kasbashada & Is-dhexgalka (PDF)
Nofeembar 29, 2018 Bandhigga Xogta ee WBWF (PDF)
Soo-koobidda WBWF ee Isku-darka iyo Warbixinta Horumarka Gaaritaanka & Is-dhexgalka (PDF)
Waa maxay Qorshaha Kasbashada & Isdhexgalka?
Qorshe kasbasho iyo isdhaxgal degmo kasta waa inay la jaanqaadaan shuruudaha WBWF. Qawaaniinta Minnesota waxaa loo maray ujeedka:
Raadinta isdhexgalka midabka iyo dhaqaalaha
Kordhinta guusha tacliinta
Abuuritaanka fursado waxbarasho oo loo siman yahay
Yaraynta kala duwanaanshaha tacliinta ee ku saleysan asalka ardayda, jinsiyada iyo dhaqaalaha
Degmo kasta waa inay dhistaa guddi la-talin ah oo bulshada kala qayb qaata qorshaynta iyo hirgelinta qorshaha istiraatiijiyadeed. Guddiga La-talinta WBWF ee degmadeena ayaa ka tarjumaya kala-duwanaanta degmadeena, waxaana ku jira ardayda, xubnaha qoyska, shaqaalaha iyo xubnaha bulshada. Guddigan wuxuu warcelin ka bixiyaa qorshahayaga istiraatiijiyadeed wuxuuna talooyin u soo jeediyaa maamulka degmada iyo Guddiga Dugsiga.